महाराज, घुँडाबाज र हुल्लडबाजहरू
डा. गाेपाल ठाकुर मंगलबार, कात्तिक ६, २०७५ मा प्रकाशित
हामी औपचारिक रूपले गणतन्त्रमा आएको दस वर्ष बितिसकेका छन् । धर्म्निरपेक्षता र संघीयता सहितको लोकतन्त्रले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहका निर्वाचनहरूको सफलता पछि तीनै तहमा सरकार पनि पाइसकेको छ ।
तर राजतन्त्रलाई बिदा गरिसके पनि उसको विरासतको रूपमा रहेको सामन्ती संस्कारबाट न त हामीले मुक्ति पाएका छौँ न त मुक्ति पाउने शासकीय व्यवहारकै प्रदर्शन भएको देखिन्छ ।
त्यसैले सामन्ती साम्राज्यका महाराज, घुँडाबाज र हुल्लडबाजहरूका कारण अमनचयन र सांस्कृतिक सद्भावमा समय-समयमा खलल परेका परिदृश्यहरू अद्यपि विभत्स रूपमै देखिँदै छन् ।
यस पालिको दशैंले बिदा लिन लागेको बेला यी तीनै प्रवृत्तिहरू अलि बढी नै चर्चामा छन् । सबैभन्दा बढी हिलो छ्याप्ने काम राष्ट्रपति समक्ष पूर्व र वर्तमान सर्वोच्च नोकरशाहहरूले घुँडा टेकी टीका ग्रहण गरेको सन्दर्भमाथि भएको छ ।
यसमा कुनै दुई मत छैन कि वंशानुगत रूपमा सर्वश्रेष्ठ शासक ठानेका महाराजाधिराजहरूको मानसिकता अहिले जनताको छोराछोरी भएर जनताकै मतबाट निर्वा्चित शासकहरूमा जहाँको तहीँ छ ।
त्यसैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायतका अलंकारिक देखि कार्यकारी पदमा पुग्नेहरू अझै पनि आफूलाई श्री ५ र श्री ३ नै ठानिरहेका छन् ।
परिणामतः हिजोका श्री ५ र श्री ३ हरूले कथित बडादशैँ लगायतका चाडपर्व र जात्राहरूका बेला गर्दै आएका टीका, दान-दक्षिणा, भोटो प्रदर्शन, दान-बक्स जस्ता घटिया हर्कतहरूलाई अझै गणतन्त्रका शासकहरूले पनि आ आफ्ना शाख र शोखकै रूपमा निरन्तरता दिएका छन् । सर्वप्रथम यिनीहरूलाई धर्म्निरपेक्षता, संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र केहीले पनि छोएका छैन ।
वास्तवमा यी घटिया हर्कतहरू राजतन्त्र निलम्बन भएकै दिनदेखि कम्तीमा सार्वजनिक रूपमा बन्द हुनुपर्थ्यो, तर हाम्रो गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपतिले पूर्वराजाहरूका यस्ता सबै कामहरूलाई विरासतमा पाएको भन्ठानेर निरन्तरता दिए ।
त्यसभन्दा थोरै पहिले जाने हो भने २०४७ पछाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले हिजोका श्री ३ का सांस्कृतिक आचरणहरूबाट टाढिनुपर्थ्यो । तर सनातनी हिन्दूहरूका चाडपर्वहरूमा खासगरी कथित बडादशैंलाई कथित नेपालीहरूकै सबैभन्दा ठूलो चाडको रूपमा स्थापित गर्ने धृष्टता गरे ।
एक पटक मैले दशैंलाई नेपालीहरूको चाड नभनी हिन्दूहरूको चाड भन्दा एकजना ठूलै नेता र पछि प्रधानमन्त्री बनीभ्याएका साम्यवादी महानुभावले बडो नमीठो गरी हप्काउनु भएको थियो । त्यस बेला त संविधानले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नै मानेको हुनाले मैले चित्त बुझाएको थिएँ । तर धर्म्निरपेक्षता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जसले गरे पनि त्यस्तो थिचोमिचोलाई अपराध नै मान्नु पर्दछ ।
तर यो नेतृत्व पङ्‌क्ति पनि त्यतिकै पछिल्तिर फर्केको होइन । उच्चपदस्थ घुँडाबाजहरूको यस कुकृत्यमा ठूलै भूमिका छ । ठूल्ठूला नोकरशाहहरूले सबैभन्दा पहिले यिनीहरूलाई महाराज बनाउन दरबारिया शब्दावली ‘बक्सियोस्’ बाट सम्बोधन गर्न सुरू गरे ।
फलतः आज शीर्षस्थ साम्यवादी नेताहरूको घरपरिवारमा ‘आइस्योस्, गइस्योस्’ मात्रै होइन, ‘घिचिस्योस्’ सम्मका शब्दावलीहरू पनि सुन्न पाइन्छ । यसको सुरुवात २०४७ को परिवर्तन पछि दरबारको चाकडी गर्ने घुँडाबाजहरूले शीर्ष पार्टी नेतृत्वको चाकडी सुरू गरे ।
फलतः शीर्ष पार्टी नेतृत्व महाराजमा परिणत भयो जसको पहिलो औपचारिक उपयोग डा. रामवरण यादवले गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा गरे । तर कथित लोकतन्त्रवादीहरूको जीऊमा जुम्रा पनि सरेको भान भएन । त्यसैको निरन्तरता वर्तमान राष्ट्रपतिबाट हुँदा अहिले आलोचनाको खोलो बगाइएको छ ।
तसर्थ नेतालाई महाराज बनाउनुमा यी उच्चपदस्थ नोकरशाह घुँडाबाजहरू पहिलो दर्जाका कसुरदार हुन् । तर यसको मतलब नेतृत्व पङ्‌क्तिलाई दूधले धोइपखाली गर्नु होइन । राजनीतिक नेतृत्व पनि ‘शादा जीवन, उच्च विचार’को शादगीबाट टाढिएकै हो । फलस्वरूप कर्मचारीतन्त्रको नोकरशाही राजनीतिक दलहरूमा पनि बडो सजिलोसँग सरेको छ ।
यसरी महाराज र घुँडाबाजहरूको यथास्थितिको निरन्तरतामा धार्मिक हुल्लडबाजहरू मौलाउने अनुकूल वातावरण बन्न गएको छ । भोजपुरीमा एउटा उखान छः—
राम राम करे अलगोइआ के जोए ।
कब आग लागे जे रोजी होए ।।
अर्थात् गाउँमा आगो लाग्दा मनग्गे चोर्न पाउनेहरू त आगलागी पर्खेरै बसेका हुन्छन् । जहाँ-जहाँ हिन्दू-मुस्लिम दुबै समुदायको साझा बस्ती छ त्यहाँ प्रायः महावीरी झण्डा र दशैंमा देवी विसर्जनको बेला सामान्यतया ठाकठूक पर्ने सम्भावना रहन्छ नै । त्यसैले कपिलवस्तुमा अहिले देखिएको हिन्दू-मुस्लिम तनाव नयाँ होइन ।
देशका अन्य कतिपय ठाउँमा पनि बेलाबेलामा यस्ता तनाव र दङ्गा-फसाद विगतमा पनि देखिएकै थिए । यसको मूल कारण हो धार्मिक वा मजहबी अन्धविश्वास ।
महावीरी झण्डा तथा नवरात्रि पूजन र त्यसको विसर्जनको बेला रङ्ग-अबीर उडाउँदा सनातनीहरूका देवी-देउता-भगवान खुशी हुने र उनीहरूको पनि लोक-परलोकको बाटो सुगम हुने अन्धविश्वास सनातनी हिन्दूहरूमा व्याप्त छ भने कब्रिस्तान, इदगाह, मस्जिद जस्ता इस्लामिक धार्मिक महत्त्वका ठाउँहरूमा रङ्ग-अबीरको धूलो पर्दा पनि हराम हुने यानी खुदा(अल्लाह रिसाउने र जन्नत (स्वर्ग) को बाटो थुनिने भन्ने अन्धविश्वास मुस्लिमहरूमा पनि व्याप्त छ ।
वस्तवमा धर्म्निरपेक्ष राज्यले यस्ता सबैखाले अन्धविश्वासहरूबाट आम जनमानसलाई माथि उठाउने खालका शिक्षादेखि लिएर आदर्शवादविरोधी तालिम(प्रशिक्षणको आयोजना गर्नु पर्ने हो । तर त्यसो हुनुको सट्टा अघोषित रूपमा अहिलेको राज्यको स्वरूपले पनि हिजोको हिन्दू अधिराज्यकै निरन्तरताको झझल्को नै दिएको छ ।
कारण छ हिजो देवासुर सङ्ग्राम लेखेर प्रसिद्धि कमाएका चिन्तकहरू नै सनातनी कर्मकाण्डीमा पतित हुँदा पनि साम्यवादको मुकुण्डो उतार्न तयार छैनन् । अर्को कुरो राज्यले यस्तो सांस्कृतिक परिवर्तनको अभियान थाले पनि तुरुन्तै प्रतिफल नआउन सक्छ ।
तसर्थ त्यस्ता संवेदनशील ठाउँहरूमा शान्ति सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र परिआएको खण्डमा त्यस्ता वारदातको संभावित समयमा नेपाली सेनाको तैनातीकरण पनि राज्यले गराउनु पर्ने हो र कतिपय ठाउँमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति छ पनि ।
तर तिनको अनुभूति नहुँदा नै त धार्मिक हुल्लडबाजहरूको इशारामा यस्ता दङ्गा-फसाद भइरहेका छन् ।
त्यसैले राज्यमा न्यूनतम अमनचयन स्थापित गर्नको लागि पनि सर्वप्रथम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि आफूलाई महाराज सम्झिनेहरू जनताको अव्वल दर्जाको सेवकको मानसिकताका साथ जनसेवामा जुट्नु पर्ने देखिन्छ ।
अनि जब महाराज नै छैनन् भने उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि घुँडाबाज बन्न छोडेर वास्तविक रूपमा स्वाभिमानी देशसेवकको रूपमा उभिनु पर्‍यो ।
यति भइसके पछि यी धार्मिक हुल्लडबाजहरू पनि बेलैमा तह लाग्ने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ जसले आम जनजीवन दङ्ग-फसाद र कर्फ्यूको आतङ्कबाट मुक्त हुँदै विश्वबन्धुत्व निर्माण गर्दै अघि बढ्छ ।